Saamiyada, waqtiga hogaaminta waa ilaa 7 maalmood. Soosaar ballaaran, waqtiga hogaaminta waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacag bixinta deebaajiga. Waqtiyada hogaanku waxay dhaqan gelayaan markaan helno deebaajigaaga, waxaanan haysannaa oggolaanshahaaga ugu dambeeya alaabooyinkaaga. Haddii waqtiyadeena hogaaminta aysan ku shaqeynin waqtigaaga kama dambeysta ah, fadlan ka gudbo shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku deyi doonnaa inaanu ku haqabtiro baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Waxaad ku bixin kartaa lacagta koontadayada, Western Union, PayPal, TT ama LC